UAEको सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले पायो पूर्णता – मझेरी डट कम
संस्थाको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको प्रथम उपाध्यक्षमा स्याङ्जा घर भै हाल युएइरहँदै आउनु भएका कवि अजित क्षेत्रीलाई चयन गरेको हो । कार्यसमितिको दोश्रो उपाध्यक्षमा यसअघि नै अधिवेशनले सरु शीतल राईलाई चयन गरिसकेको छ । संस्थाको केन्द्रीय महाधिबेशन ६ महिना अघि सम्पन्न भएको थियो । महाधिबेशनमा रिक्त रहेका केही पदहरुमा हालै बसेको बैठकले पदस्थापन गरेको हो ।
बैठकले संस्थाको सह कोषाध्यक्षमा युएईमै रहेर कलम चलाइरहनु भएकी अमृता बान्तवा राईलाई चयन गरेको छ । यस्तै संस्थाको अनुशासन समितिको संयोजकमा कवि/गजलकार शाश्वत गोविन्द ढुंगाना र नेपालको प्रदेश नम्बर दुईको इञ्चार्जका रुपमा गजलकार कृष्ण घिमिरेलाई चयन गरिएको संस्थाका महासचिव डिजि शर्माले जानकारी दिनु भयो । बैठकले युएईमै रहेका सिन्धुलिका धनक बहादुरलाई संस्थाको केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ ।
संस्थाले आवश्यकता अनुसार संस्थामा केन्द्रीय पदाधिकारी थप्दै जाने र विभिन्न देशमा यसका शाखा बिस्तार गर्ने काम तिब्र पारेको संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगर बताउनुहुन्छ ।
युएईमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस साहित्यिक संस्थाले बर्सेनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साहित्यिक प्रतियोगिता र पुस्तक प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । संस्थाको लोकप्रियतासँगै हाल संसारभर यसका आजीवन सदस्य बन्ने क्रम बढ्दो छ ।
1 thought on “UAEको सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले पायो पूर्णता”
हरि+मोहन July 12, 2021 at 12:12 am
युएइमा केन्द्रिय कार्यलय कहाँ रहेको छ ? कार्यक्रम हरु कहिले हुन्छ्न ? हामी पनि जोडिन पाए आभारी हुनेथियौ ।